Etu esi etinye Firefox na Raspberry Pi | Akụrụngwa n'efu
Etu esi etinye Firefox na Raspberry Pi
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji Raspberry Pi dị ka minipc ga-etinye Raspbian na Rasberi Pi anyị. Sistemụ arụmọrụ dị ike nke na-agbanwe nke ọma na rasberi Pi, mana o nwere ọghọm ya. Otu n'ime ha bụ sọftụwia nke arụnyere.
Ihe nchọgharị weebụ Raspbian bụ Google Chromium, ezigbo ihe nchọgharị ma ọ bụghị Mozilla Firefox nke ọtụtụ n'ime anyị na-eji kwa ụbọchị.. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gwa gị otu esi etinye ụdị Mozilla Firefox kachasị ọhụrụ na Raspbian gị.
1 Mozilla Firefox 52 ESR Ntinye
2 Wụnye Mozilla Firefox 57 na Raspbian
3 Installwụnye Mozilla Firefox 58
Mozilla Firefox 52 ESR Ntinye
Wụnye Firefox na Raspbian dị mfe, anyị kwesịrị imeghe ọnụ na pịnye ndị na-esonụ:
Wụnye Mozilla Firefox 57 na Raspbian
Ma nke a ga-wụnye ESR version, a nnọọ anụ ogologo support version ma adịghị ọsọ ọsọ dịka Firefox 57, ama ama Firefox Quantum. Ọ bụrụ na anyị chọrọ a ọhụrụ version anyị ga-eme ndị na-esonụ. Nke mbụ, anyị mepee ọnụ ma dee ihe ndị a:
Na faịlụ nke meghere anyị gbakwunye ihe ndị a:
Anyị na-echekwa ya, mechie faịlụ ahụ ma dee ihe ndị a:
Mgbe ị wụnye nsụgharị a, nke bụ Mozilla Firefox 57, anyị na-ede ihe ndị a ọzọ na ọnụ ya:
na anyị na-ahapụ ahịrị na anyị tinye dị ka ndị a:
Anyị na-echekwa mgbanwe ma pụọ ​​na faịlụ ahụ. Ugbu a, anyị nwere Mozilla Firefox 57 nke na-abụghị nke kachasị ọhụrụ mana ọ kachasị kwụsie ike ma kachasị ọsọ nke dị.
Installwụnye Mozilla Firefox 58
Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ wụnye Mozilla Firefox 58, anyị kwesịrị ịgakwuru na nbudata na ebe nrụọrụ weebụ, budata ngwugwu ahụ na ụdị ọhụụ. Anyị na-adọghe ngwungwu a ma mepụta ụzọ nweta faịlụ «Firefox», anyị pịa okpukpu abụọ na ụzọ nnweta a ma anyị ga - enwe ụdị Firefox kachasị ọhụrụ na-agba ọsọ na Raspbian anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Etu esi etinye Firefox na Raspberry Pi
mgbe m dere iwu mbu «1
apt-nweta wụnye Firefox-esr-l10n-en-es
ọ na-agwa m na faịlụ mkpọchi / var / lib / dpkg / mkpọchi-frontend - emeghe enweghị ike imeghe (13: ekweghị ikike)
Zaghachi ka ramon